माइकल कारिक बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - परिवार जीवन
घर संयुक्त राज्य फुटबॉल स्टोरीहरू अंग्रेजी फुटबल खेलाडीहरू माइकल कार्रिक बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
LB एक फुटबल जीनियस को पूर्ण कहानी प्रस्तुत गर्दछ जो उपनाम द्वारा प्रसिद्ध हो; "Carras"। हाम्रो माइकल कारिक बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू तपाईंको बाल्यकालको समयदेखि आजको दिनसम्म तपाईंलाई उल्लेखनीय घटनाहरूको पूर्ण खाता लिएर आउँदछ।
विश्लेषण प्रसिद्धी, पारिवारिक जीवन र उहाँको बारेमा धेरै अफ-पिच तथ्यहरू अघि उनको जीवन कहानी समावेश छ।
हो, सबैलाई आफ्नो केन्द्रीय मिडफील्ड क्षमताहरूको बारेमा थाहा छ तर केहीले माइकल कार्रिकको बायोलाई विचार गर्छन् जुन अत्यन्त चाखलाग्दो छ। अब थप adieu बिना, सुरु गरौं।
माइकल कारिक बचपन कहानी - प्रारम्भिक जीवन र परिवार पृष्ठभूमि:
माइकल कारिकको जन्म जुलाई १ 28 1981१ को २ United औं दिनमा वाल्सेन्ड, संयुक्त अधिराज्यमा भएको थियो। उहाँ आफ्नो आमा, लिन कारिक र बुबा, भिन्स क्यारिकको जन्म भएको थियो।
माइकल टायिन र वेयरमा हुर्किए र न्यूकसल युनाइटेडको बाल्यावस्था फ्यान थिए। फुटबलमा उनको पहिलो संलग्नता age वर्षको उमेरमा आयो जहाँ उसले वालसेन्ड ब्वाईज क्लबसँग हरेक शनिबार राति बुबाको स्वयम्सेवा कार्य क्लबमा सौंच पाँच-साइड साइड फुटबल खेल्थ्यो।
साथै माइकल पनि बाल्यकालको फिल्म स्टार थियो। १ 13 वर्षको उमेरमा, क्यारिकलाई बीबीसी बाल कार्यक्रमबाट प्रोफाईल गरिएको थियो प्रत्यक्ष र लात एपिसोड 49, जुन4फेब्रुअरी 1995 मा प्रसारित भयो।
फुटबल फुटबल उनको लागि १२ बर्षको उमेरमा अझ गम्भीर भयो जब उनी बर्नसाइड हाई स्कूल र पछि उत्तर टाईनेसाइड स्कूलहरूमा चयन भए। उसको स्कूलको वर्षहरूमा, र वेस्ट ह्याम युनाइटेडमा बसाई सयौं बर्ष सम्म, क्यारिक वास्तवमा एक केन्द्र-फोरवर्ड को रूप मा खेल्नुभयो।
यो वेस्ट ह्याममा मात्र उनले मिडफिल्डरको रूपमा खेल्न थाले। खेल्ने क्रममा पनि माइकलले वाल्सेन्डको वेस्टर्न मिडिल स्कूल र बर्नसाइड कम्युनिटी हाई स्कूलमा १ 1997 XNUMX in मा जीसीएसई परीक्षा पूरा गरेर आफ्नो अध्ययन जारी राख्यो।
माइकल कारिक जीवनी - प्रसिद्धि बढ्दै:
1999 देखि 2000 को बीच, माइकल ताइनटेनममा 2004 मा आफ्नो अन्तिम कदम अघि स्विइन्डन टाउन र बर्मिंघम सिटी को ऋण मा गए।
10 जूनमा, टोटेनहमले प्रकट गरे कि तिनीहरूले क्यिकिकका लागि मैनचेस्टर युनाइटेडबाट बोली अस्वीकार गरेका थिए, जसले प्रबन्धकद्वारा देखाएको थियो सर एलेक्स फर्गुसन पूर्व क्लब कप्तान, प्रस्थान रॉय कीन को एक प्रतिस्थापनको रूपमा।
निम्न दिन, टोटेनहम प्रबन्धक मार्टिन जोलले जोर दिएका थिए क्यारिक क्लबसँग रहन थालिन् "म माइकल जस्ता खेलाडीलाई हराउन चाहन्न, जो गत सिजनमा हाम्रो सर्वश्रेष्ठ मिडफिल्डर थिए।"
२ July जुलाई २०० 28 मा, टोटेनह्यामले घोषणा गरे कि क्लबले क्यानिकलाई म्यानचेस्टर युनाइटेडमा हस्तान्तरण गर्ने सम्झौतामा सहमत भएको छ। बाँकी, तिनीहरू भन्छन्, अब इतिहास हो।
लिसा क्यारिक को हो? पहिले लिसा राउगहेड - माइकल क्यारिक पत्नी?
उहाँ फुटपाथहरूलाई यस्ता प्रकारका छन् जुन बचपन मिठाईमा। माइकलले लिसा डेटिङ सुरु गरेपछि उनीहरू उच्च विद्यालयमा थिए।
वर्षको लागि डेटिङ पछि कार्र्कले विवाह गरे लिसा रूग्रेड, जो एक Pilates वाइमन्धाम, लिसेस्टरशायरमा व्यवसाय डिग्रीको साथ प्रशिक्षक। विवाह १ friends जुन २०० 16 मा साथीहरू र परिवारको अगाडि भयो।
क्रिस सानो बालबालिकाको कथा कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
दुबै प्रेमिकाहरू एक छोरी, लुइस र एक छोरा जेसी छन्। यो उनी हेलोवीन कसरी मनाउँछन्।
माइकल कारिक व्यक्तिगत जीवन:
माइकल क्यारिक आफ्नो व्यक्तित्व को निम्नलिखित विशेषता छ।
शक्ति: माइकल क्रिएटिव, भावुक, उदार, गहिरो मनपर्दो, उत्साहित र स्वभाविक हो।
कमजोरीहरू: एक निजी मा, माइकल केहि समय मा आत्म-केन्द्रित हुन सक्छ।
के माइकलले मनपर्छ: माइकल आफ्नो घर थियेटर जस्तो, छुट्टिँदै, प्रशंसा गर्दै, महंगी चीजहरू, उज्यालो रंगहरू र मित्रहरूसँग रमाइलो हुन्थे।
के माइकलले नमनपराउँछ: माइकल नमनपराउनु, कठोर वास्तविकताको सामना गर्न, राजाको जस्तो व्यवहार गरेन।
सारांशमा, माइकल एक प्राकृतिक जन्मजात नेता हो। उहाँ रचनात्मक, आत्म-विश्वास, शक्तिशाली र प्रतिरोध गर्न अत्यन्त गाह्रो हुनुहुन्छ। जीवनको जुनसुकै क्षेत्रमा पनि आफूले गर्न चाहेको कुरा हासिल गर्न उहाँ सक्षम हुनुहुन्छ। ऊ "जंगलको राजा" स्थितिमा विश्वास गर्दछ।
माइकल कारिक पारिवारिक जीवन:
फुटबल लगानी भुक्तानी गर्नुअघि माइकल एक मध्य मध्यम परिवारको पृष्ठभूमिमा आए। तिनको पिता एक पटक मिडिल्सब्रोको लागि खेल्नुभयो र क्लबमा रिजर्व टोलीमा पुग्नुभयो।
तलको फोटोले किशोरी क्यारिकले आमा लिनलाई बताइरहेको छ कि उनीसँग "थोरै छुटे" कहिलेकाहीँ आफ्ना बुढाहरू
उसले भन्यो: "मेरो आमाले मेरो लागि मेरो जुत्ता खाली गर्दछ किनकि जब म भित्र आउँछु मँ यो गर्दिन। "म भन्छु 'म गइरहेको थिएँ तर तपाईं पहिले त्यहाँ पुग्नुभयो," माइकल भन्छन्।
भाइरस: क्यारिकको एक भाई, ग्रिम छ, जो चार वर्ष कान्छो छ। ऊ वेस्ट ह्याम युनाइटेडमा पनि थियो तर धेरै घाइते भए। आफ्नो अकाल सेवानिवृत्त पछि, उहाँ खेल शिक्षा क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभयो। ग्रिमले खेल कोचिंगमा स्नातकोत्तर डिग्री एमएससी पूरा गर्यो।
यसले उसलाई अधिकार र न्यूकसल यूनाइटेड एकेडेमी अन्तर्गत -१० को प्रशिक्षक सल्लाहकारको काम दियो। ग्रिमले पछि एफए क्षेत्रीय कोच मेंन्टर (उत्तर पूर्व र यार्कशायर) को जागिर पाए। यो एफए कौशल कोच र टीम नर्थम्ब्रिआ एफसीमा जादू कोचिंगको रूपमा काम गरेको years बर्ष पछि आयो
माइकल कार्रिकले आफ्नो भाइ Graem ले एक राम्रो खेलाडी भन्दा खुलासा गरेको छ वेन रोनी आफ्नो साना दिनहरुमा।
'मैले पहिलो पटक वेनको बारेमा सुने जब मेरो भाईले युथ कपमा उसको बिरूद्ध खेलेको थियो,' कार्क्रिकले भन्यो। 'वेन एभर्टनमा थियो, ग्रिम वेस्ट ह्याममा थिए। मेरो भाईले मेरो बारेमा उसलाई बताएको पहिलो पटक थियो।
उनले वास्तवमा तिनको असल थियो, वास्तवमा! तिनले भने भने रूनी एक विशेष खेलाडी हुन गइरहेको थियो, उसले त्यसो भन्न सक्थ्यो। ” कार्क्रिकले भन्यो।
आर्सेनलको बिरूद्ध त्यो प्रसिद्ध गोल एक थियो, जसले वेनलाई सबैको दिमागमा उक्सायो। “सबैले उहाँ को बारे थाहा पाउनु भयो। जब देखि आर्सेनलको बिरूद्ध उसको गोल भयो, तपाईं उनीबाट छुटकारा पाउन सक्नुहुन्न! " कार्क्र भन्छन्
माइकल कारिक अनटोल्ड जीवनी तथ्य - एक अन्यायपूर्ण विश्व:
सत्य भन! माइकलको अजीब, बुद्धिमान मिडफील्ड प्रोम्प्टिंग को लागी आफ्नो अधिक प्रसिद्ध साथीहरु को मान्यता कहिल्यै पाएन।
तपाईंले यो लेख पढ्नु आफैलाई सोध्नुपर्छ: अतीत 20 वर्षको शीर्ष अंग्रेजी मिडफील्ड खेलाडीहरू? हामी सही रूपमा फिर्ता हेर्न र अर्को पीढी अद्भुत सबै-वरिपरि क्षमताको बारेमा बताउनेछु स्टीवन गेरार्ड, बकाया गोलहरू रन र रेकर्डको समय रक्षक फ्रैंक लम्पर्ड र पल Scholes, जो लक्ष्य बनाए र गोल गरे को सरासर प्रौद्योगिकी पहल।
माइकल क्यारिक अर्को मिडफिल्डर हो जो यी किंवदन्ती बीच आफ्नो ठाँउ पाउन योग्य छ: ऊ असाधारण पासिंग र आफ्नो स्थानिय खेल र बुद्धिमत्ताको साथ फुटबल खेल को प्रवाह को हुकुम गर्न को क्षमता संग एक खेलाडी थियो। दुःखको कुरा, माइकललाई कम महत्त्व दिइयो, अन्ड्रेपरेसिएटेड।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो माइकल कारिक बचपन कहानी प्लस अनउठाइएको जीवनी तथ्यांक पढ्न को लागी धन्यवाद। LifeBogger मा, हामी शुद्धता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्दछौं। यदि तपाईले केहि देख्नु भयो जुन यस लेखमा ठिकै लाग्दैन भने, कृपया तपाईको टिप्पणी राख्नुहोस् वा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् !.